Mainty ny Sumerianina, mponina any Mesopotamia - Afrikhepri Fondation
Mpanjakan'i Dariosy, mpanjakan'i Persia
Somerianina, mainty hoditra ny mponin'i Mesopotamia
SAraka ny asa soratry ny Baiboly, Nimrod zanakalahin'i Kush (Etiopia sy Sudan) no mpanorina an'i Sumer. Io vahoaka mainty hoditra io no tokony hananantsika fampandrosoana sy fahaterahan'ity sivilizasiôna ity satria ny fahalalan'izy ireo no nampisondrotra an'i Sumer. Ny zava-misy dia voamarina amin'ny alàlan'ny paletera sumeriany, tamin'ireto farany ireto dia hitantsika fa niantso ny tenany ny Sumerianina hoe " Black Heads Ary namaritra ny tenany Kushites avy any amoron'i Neily hipetraka any Azia.
Ny nanorina ny sivilizasiôna voalohany tany Mezopotamia dia Sumerians mainty. Mesopotamia dia tany ara-Baiboly an'ny Sinara (Sumer). Ny Sumerianina dia tsy namela fisalasalana momba ny fomba fahitan'izy ireo ny tenany. Niantso tena ny Sumerianina SAG-gig-ga, olona manana loha mainty.
Mba hamaritana ny soratra miorina amin'ny soratra miorim-paka Sumerian dia nampiasa fiteny etiopiana i Sir Henry Rawlinson: Afan Oromo na Oromiffa (Oromiffa) satria fantany fa avy any Etiopia ny Sumerianina.
Nampiasa ny bokin'ny Genesis a i Henry Rawlinson mba hahitana hoe iza no Mezopotamia. Nanazava izy fa ny mponin'i Babylona voalohany dia naseho ny anarana Nimrod ary ny fianakavian'i Cham: Kushites, Egyptianina, sns. Ity anarana ity dia avy amin'ny lazan'ireo olona mihaza leoparda (Nimri).
Ny Sumerians sy Elamites, toa ireo mpanorina ny sivilizasiona Indus, dia avy any Afrika. Izany no antony ifandraisan'ny fiteny Elamita sy sumerian amin'ny fiteny afrikanina sy dravidian.
Ny Kushites, izay avy tany Afrika Atsinanana ka hatrany Azia dia nantsoina hoe Kushites hatrany. Miharihary indrindra izany amin'ny anaran'ny toerana sy ny anaran'andriamanitra. Ny Kassites, ny mpitondra lehibe any Iran dia mibodo ny afovoan'i Zagros. Ny andriamanitra Kassite dia nantsoina hoe Kashshu, izay anaran'ny vahoaka ihany koa. Ny KSH, singa singa dia hita ihany koa any India. Ohatra hoe Kishkinthai, dia anarana nomena ny fanjakana Dravidian taloha tany India atsimo. Ho fanampin'izany, tokony ho tsaroana fa ny Kings of Sumer, dia nantsoina matetika hoe "Kings of Kush". Ny foko Kushite lehibe any Azia Afovoany dia nantsoina hoe Kushana.
Ny zanatany Kushite manan-danja indrindra any Iran dia ny Elam. Ny Elamita dia niantso ny tanindrazany KHATAM na KHALTAM (Ka-taam). Ny renivohitr'i Khaltam izay antsoinay hoe Susa, dia nantsoin'ny Aryans ho KHUZ (Ka-u-uz), ny NIME (Ni-mai) avy amin'ny mponin'i Sumer, ary i Kushshi (Cush-elle) nataon'ny Elamita. Ao amin'ny soratra Akkadian, ny Elamita dia nantsoina hoe GIZ-BAM (tanin'ny tsipika) toa an'i Ta-Seti, (tanin'ny tsipika), ilay anarana taloha hoe Nubia.
Ny fandalinana ny Sumerianina, Akkadians, Asyrianina ary Elamita dia manomboka amin'ny famakiana ny soratra cuneiform nosoratan'i Henry Rawlinson (1851). Henry Rawlinson (1810-1895) dia nandany ny ankamaroan'ny asany tamin'ny Atsinanana. Toa nanome saina malalaka azy raha ny tantara no resahina. Misaotra ny fandikana ny Behistun soratraHitany fa nanorina ny sivilizasiona nataon'ny Kushite na ny Hamitic ny Baiboly.
Rawlinson gaga nandritra ny fikarohana nataony fa hitany fa avy amn'ny Kushite ireo nanangana ny sivilizasiôna Mesopotamia.
Mpandresy an'i Rawlinson, Edward Hincks (1792-1866). Nanohy ny asan'i Rawlinson i Hincks.
Assyriologist Jules Oppert nanazava fa ny mpanorina ny sivilizasiona tany Mesopotamia dia niantso ny tenany hoe Ki-en-gi "tany tena tompo" (Kang, Tr. "Pred ilainaors, Pra-humans", ary koa Kangars taty aoriana).
Albert Terrien avy any LaCouperie dia nilaza mazava fa ny Sumerianina, Akkadiana ary na dia ny Asyrianina izay niantso ny tenany hoe Salmat kakkadi "olona mainty loha", dia mainty fiaviana avy Kushite avokoa. Ankoatr'izay, ny tsangambato Behistun dia nilaza mazava fa mainty koa ireo Elamita.
Ny tononkira na ny siansa nosoratan'i Dr. Clyde Winters
Nanomboka nisotro ny tantara
11 vaovao avy amin'ny € 8,95
6 ampiasaina amin'ny € 1,69
Nohavaozina farany tamin'ny 18 Jona 2021 11:05 hariva
Fifanarahana mirehitra mirehitra - Alice Bailey (PDF)
Ity hazavana ato aminay ity - Krishnamurti (Audio)
Papyrus am-ponja: fampianaran'ny Ptahotep